Miisaan lumis: Cunnooyinka ugu fiican ee loo yaqaan '5' cunnada quraacda ee kaa dhigaya inaad lumiso miisaanka - HEALTH PLUS MAG - TELES RELAY
ACCUEIL » QODOBO »Miisaanka oo lumiya: 5 cuntooyinka ugu fiican ee cunta quraacda oo kaa dhuminaya miisaanka - SANTE PLUS MAG
Miisaanka oo lumiya: 5 cuntooyinka ugu fiican ee ay ku cunaan quraac oo kaa dhigi kara miisaanka
Posted on: 15 July 2019 ilaa 13 h 14 min
Si loo yareeyo si wax ku ool ah, waxa fiican in la qaato macnaha erayga "cun cun sidii boqorka subaxdii, sida amiir faro badan iyo habeen sabtida." Runtii, quraacdu waa cuntada roodhida ee maalintii. Waxay u oggolaaneysaa jirkaaga inuu daboolo baahidiisa nafaqeynta ka dib saacadaha dheer ee soonka.
Sida laga soo xigtay hal waxbarasho ha ahaato ama aan la cunin quraac, waxay u muuqataa in cuntadani ay muhiim u tahay. Cilmi-baarayaashu waxay qireen in kuwa quraacda subaxda inay cunaan subaxnimadoodu waa feejignaan badan oo waxtar leh maalin kasta. Si arrintan loo sameeyo, quraacdu waa inay ahaato mid tayo leh oo joogto ah.
Ha ilaawin in yar quraac waxay ka kooban tahay:
- Qayb ka mid ah cuntooyinka istaarijiga ah: Cunto ama roodhida roodhida / galley / oatmeal, iwm.
- Itaal ka mid ah borotiinka: ukunta / turkey ham / Ricotta / geedka jilicsan, iwm.
- Midhey: Kuai, orange, shiilan, liin, iwm.
- Cabitaan aan sonkor lahayn: kafee / shaah cagaaran, iwm.
Waa kuwan cuntooyinka 5 ee aad u baahan tahay inaad ku darto quraacdaada si aad ugu dhufato mustaqbalka fog:
1. Ukunta ukunta
Ukuntu aad bay ugu taajirsan yihiin borotiinka, antioxidants, fitamiin D iyo qoob-ka-goynta, halka ay ku sii badan yihiin kalooriyeyaasha. Sidaas awgeed isticmaalka borotiinku wuxuu keenaa dareen ah ficil sii dheeraaday. Sida laga soo xigtay hal waxbarashoWaxaa la isku raacay in borotiinka cuntadu uu si weyn hoos u dhigo dareemada gaajada maalinta oo dhan iyo in la yareeyo cunto qaadashada dambe. Ukuntu waxay sidoo kale xakameysaa sonkorta dhiigga si ay ula dagaallanto jahawareerka sonkorta.
Tusaalaha caadiga ah ee quraacda leh ukunta:
- liin lagu riixay biyo (si ay u sakhraansan tahay caloosha oo madhan)
- 40 grams oo ah rooti macaan
- Ukunta 1
- 1 Gariiga Giriigga
- Shaah ama kafee aan sonkor lahayn
2. Subagga dabacasaha ah
Waxaa laga yaabaa inay u muuqato mid aan suurtagal ahayn, iyo subagga looska, sida wanaagsan iyo baruurta sida ay tahay, waxay kaa caawin kartaa inaad lumiso miisaanka!
Ilaha borotiinka ah, saliida lawsku waxay u dhaqmaan dufanka aan lakulmayn iyo dufanka leh, oo la mid ah kuwa laga helo saliidda saytuunka. Waa hodan ku jirta potassium. Sida laga soo xigtay hal waxbarasho, subagga lowsku sidoo kale waa mid hodan ku ah fiber, kaas oo la jaanqaadaya borotiinka, waxa uu ka dhigan yahay kalsooni aan la isku halleyn karin tan iyo labadan qaybood waxay kordhinayaan fadhi. Waxa kale oo ku jira antioxidants, fitamiinnada iyo macdanta jirka ka ilaaliya xagjiryada bilaashka ah. ah cacachuètes awoodaan, inkastoo ay ka kooban yihiin kalooriga, waxay caawimaan hoos u dhigaan sababtoo ah waxay keenaan dareen daba dheerad ah iyagoo yareynaya dhiigga xannuunka dhiigga xun. Dabcan, inaad ku raaxaysato waxtarkeeda, waxay u isticmaali doontaa dhexdhexaad!
Nooca caadiga ah ee subagga looska:
- 40 garaamiin rooti ah
- 1 shaaha oo ah subagga lawska
Blueberries aad ayey u yar tahay kalooriyeyaasha. maadooyinka sare ee antioxidants kuwaas oo flavonoids ay suurtagal tahay in ay la dagaallamaan kordhinta xagjirnimada lacag la'aan ah iyo stress oxidative ee jirka. Waxa kale oo ay ku jiraan fiber, berry waxay kaa caawinaysaa si aad u yarayso baruurta caloosha iyo kicin-shiid asalka keenaya kharash calorie weyn inta lagu jiro qaadashada this. Sidaas darteed, in a waxbarasho, blueberries ayaa hodan ku ah fitamiinada waxayna ku jiraan daawooyinka anthocyanins waxayna caawiyaan in ay joogteeyaan heerka sonkorta dhiigga joogtada ah ee xakameynaya sonkorta.
Tusaalaha quraacda caadiga ah leh blueberries:
- 40 grams oo yaryar
- Badab cufan ah
- Qaar ka mid ah blueberries
- Caanaha qumbaha
4. Rice rooti
Rootiga galley waxay ka mid tahay roodhida ugu yar yar. Cuntada aadka u sarreysa ee roodhani waxay kordhin kartaa bolus ee jirka iyo kor u qaadista fadhiista dhowr saacadood. Waxaa aad loogu talinayaa dadka doonaya in ay miisaan lumiyaan. Nidaamka dheef-shiid kiimikaad ee jidhku wuxuu keenaa kharash aad u sarreeya. Sida laga soo xigtay hal waxbarasho, isticmaalka roodhida galley waxay keentay korodh weyn oo ah xaddiga foosha. Waxay sidoo kale gacan ka geysatay in la yareeyo cuntada la cuno maalintii oo dhan.
Nafaqada tusaale ahaan rootiga galley
- 1 adag oo la kariyey
- 1 oo beedka laga beerto Ricotta cheese
- Shaaha / Cabba aan sonkorta lahayn
Le bambeelmo waxaa lagu buuxiyaa fiber-fare, flavonoids, lemononoids iyo carotenoids. Fisigu wuxuu ka caawiyaa kor u qaadida satilitiga inta uu xawilayo gaadiidka xiidmaha ee hagaajinta habka dheef-shiidka. Antioxidants waxay jirka ka difaacaan cuduro badan. Sida laga soo xigtay hal waxbarasho, Isticmaalida cuntada lagu kariyo waxay caawisaa hagaajinta caabbinta insulin waxayna u oggolaaneysaa miisaan lumis ah sida qeyb ka mid ah cuntada.
Tusaale quraac caadi ah oo leh shaxan:
- Nabbad dhamaystiran
- 30 grams of Ricotta farmaajo cad
- Qaxwaha / shaaha aan sonkorta lahayn
Gratefruit wuxuu wax ka dhexgali karaa daawooyinka qaarkood. Waxaa lagugula talinayaa inaad la hadasho dhakhtarkaaga intaadan cunin.
Lemon laguma talinayo gubashada iyo boogaha caloosha
Saamaynta cuntooyinka 3 ma shaqeeyaan - SANTE PLUS MAG
Xasuuso kuwa kugula hadlaya dhabarkaaga, waxay dhaleeceeyaan noloshaada si ay uga fogaadaan in ay xakameynayaan iyaga - CAYMISKA PLUS MAG
Moustik karismatik stop Carine - HALKAN HOOSE KA DHAGEYSO
Celine Dion: gabaygan oo wali keenaya welwelkiisa markasta
Dhibaatada Boqoradda: qoyska boqortooyada waa inay "isu yimaadaan" si ay u soo afjaraan sannad fowdo ka dib "dharbaaxo"
Hindiya: Pegasus wuxuu weeraray 121 dadka Hindiya ku nool kuna xadgudbay 20: WhatsApp in Government | Wararka Hindiya
19 November 22 2019 Wargeys - VIDEO
DADKA & LIFESTYLE7,872
Video dheeraad ah3,638